विचित्र समाचार – Hamropati.com
By on December 14, 2017 विचित्र समाचार, समाज
काठमाडौं, मंसिर २८ । आज राति मिथुन उल्का वर्षा बढी सक्रिय हुने भएको छ । नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीको अनुसार मंसिर १८ देखि पुस १ गतेसम्म सक्रिय रहने मिथुन उल्का वर्षा आज राति बढी सक्रिय हुनेछ प्रतिघण्टा १२० वटासम्म उल्का देख्न सकिने छ । यो वर्ष देखिने उल्का वर्षा क्षुद्रग्रह ३२०० फेथनले सन् २००९ मा अन्तरीक्षमा […]
नागरिकता पाउने पहिलो रोबोट, अब बच्चा जन्माउने चाहना
By on November 29, 2017 अन्तराष्ट्रीय, प्रविधी, विचित्र समाचार
साउदी अरब, मंसिर १३ । ऊ नागरिकता पाउने विश्वको पहिलो रोबोट हो । सोफिया नामक उक्त रोबोटलाई साउदी अरबले गत महिना नागरिकता प्रदान गरेको थियो । नागरिकता प्राप्त गरेको एक महिनापछि सोफियालाई अर्को रहर जागेको छ, बच्चा जन्माउने । नागरिकता प्राप्त गरी इतिहास रच्ने रोबोट सोफियाले परिवार भन्ने चिज निकै महत्वपूर्ण रहेको बताएको छ । […]
सुतिरहेकी प्रेमिकालाई जगाउन अजिंगर हालिदिदा (भिडियो सहित)
By on November 29, 2016 विचित्र समाचार
हरेक महिलाको सपना हुन्छ की उनको पार्टनरले हरेक बिहान प्रेमपूर्ण आवाजले निद्राबाट जगाओस् र उठाओस् । तर एकजना युवतीमाथि यस्तो भयो जुन उनले न त कल्पना नै गरेकी थिइन्, न त अब कहिल्यै भुल्न सक्छिन् । ती युवतीका ब्वायफ्रेण्डले उनलाई निद्राबाट जगाउनका लागि जुन उपाय अपनाए त्यो निकै डरलाग्दो छ । गर्लफ्रेण्ड बिहान हुँदासम्म पनि […]
यौनसम्पर्क सम्बन्धी ७ अनौठा तथ्य
By on November 28, 2016 विचित्र समाचार
१. पुरुष वीर्य महिलाको योनिभित्र ५ दिनसम्म जीवित रहन सक्छ । ५ दिनको अवधिमा यसले महिलाको अण्डालाई सेचन पनि गर्न सक्छ । तर, बाहिरी वातावरणमा भएको वीर्य केही घण्टामात्रै बाँच्न सक्छ । २. यदि पोथी फेरिट (दुम्सीजस्तो एक प्रकारको जनावर) तातो भएको बेलामा तत्काल यौनसम्पर्क गर्न भाले पाएन भने मर्न सक्छ । तातो लामो समयसम्म […]
अब आयो पाद प्रतिरोधी कपडा
By on November 7, 2016 विचित्र समाचार
पेटमा ग्यास जम्मा हुनु र पाद आउनु सामान्य कुरा हो । तर केही मानिसलाई बढि नै अपानवायु आउँदछ । सार्वजनिक स्थानमा पाद आउँदा मानिसहरु निकै समस्या पर्छन् र कहिलेकाहीँ पादले लाजमर्नु बनाउँछ । पादमा ग्याससँगै आउने दुर्गन्ध सबैभन्दा समस्याको कारक बन्दछ । पादको समस्याबाट पिरोलिएकाहरुको दुखलाई ध्यानमा राख्दै केही कम्पनीहरुले यस्तो कपडा उत्पादन गर्दैछन् जसबाट […]
पत्याउनै गाह्राे: कोही ५ वर्षमा गर्भवती, कसैका ६९ सन्तान
By on November 4, 2016 विचित्र समाचार
आमा बन्नु सजिलो कर्म होइन । संसारमा धेरै आमाहरु अप्ठेरो परिस्थितिबाट गुज्रिएर सन्तानलाई जन्म दिन्छन् र हुर्काउछन् । यहाँ भने त्यस्ता आमाहरुबारे चर्चा गरिएको छ जसले अपत्यारीलो परिस्थितिका बीच सन्तानलाई जन्म दिए र संसारभर चर्चित बने । पाँच वर्षमै आमा पेरुको तिकापोमा बस्ने लीना मेदिना संसारकै कलिली आमा भनेर चिनिन्छिन् । उनको जन्म सन् १९३३ […]
चितवनको देवघाटमा कुकुरको बलि
By on October 17, 2016 विचित्र समाचार, समाज
सरिता पौडेल चितवन, ०१ कार्तिक पवित्र तिर्थस्थल देवघाटधाममा कुकुरको बलि दिइएको छ। देवघाटको तनँहुपट्टि वेणी संगम स्थल नजिकै रहेको अघोरी बाबाको आश्रममा दशैको अष्टमीका दिन बलि दिइएको हो। देवघाटमै बस्दै आएका अखण्ड बाबा ले पञ्चबलीको नाममा डुलुवा कुकुरलाई समातेर स्थानीय माइला भन्ने शंकर बोटेलाई काट्न लगाएको स्थानीय सोम बोटेले जानकारी दिए। उनी देवघाटमा १० बर्ष […]
बियर पिउनु स्वास्थ्यको लागि यति धेरै फाइदा होला भन्ने कमैलाई थाहा हुन्छ- हेर्नुहोस बियर पिउनुको ९ फाइदाहरु
By on October 7, 2016 प्रमुख समाचार, विचित्र समाचार
के तपाई बियर पिउनु हुन्छ ? सामान्यतः बियर स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ भन्ने आम विश्वास छ । यसले मोटोपन बढाउँछ भन्ने आम धारणा रहेको छ । बियर पिउँदा कुनै फाइदा हुँदैन भन्ने मानिसहरुको बुझाइ रहेको पाइन्छ । तर बियर पिउने हो भने यो हाम्रो शरीरका लागि हितकारी छ भनेर एउटा अध्ययनले प्रमाणित गरेको छ । […]
मृत शरीरमा जीवित टाउको जोड्दै चिनियाँ डाक्टर
By on August 23, 2016 विचित्र समाचार
एजेन्सी हार्बिन (चीन) के कुनै एउटा मानिसको टाउको अर्को मानिसको शरीरमा सार्न सम्भव होला रु के कुनै व्यक्तिको गर्दनमुनिको भाग पुरै परिवर्तन गर्न सकिएला ? धेरैले उत्तर देलान्, यस्तो असम्भव र हावादारी कुराको पछि नलागेकै बेस । तर, चीनका एक डाक्टर अहिले यही अभियानको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। चीनको हार्बिन मेडिकल विश्वविद्यालयका अर्थोपेडिक सर्जन डा। रेने […]
१७ महिनादेखि गर्भवती किन जन्मिएको छैन बच्चा ?
By on August 20, 2016 विचित्र समाचार
मानिसको गर्भावस्था भनेको अधिकतम ९ महिनाकेा हुन्छ । तर चीनमा एक महिला भने १७ महिनादेखि गर्भवती छिन् । पत्याउनै गाह्रो पर्ने यो घटना चीनको हुनान प्रान्तको हो । हुनानकी वांग शी नामकी महिला सन् २०१५ को फेब्रुअरीमा गर्भवती भएकी हुन् । उनको गर्भमा रहेको भ्रुण बस्ने साल अर्थात् प्लासेन्टा राम्रोसँग विकशित नभएको हुँदा डाक्टरहरुले सुत्केरी […]